स्वास्थ्य | नेपाल आज
कात्तिक १२ । ब्याक्टेरिया विशेषगरी फोहोरी वस्तुहरुमा हुन्छ भन्ने भ्रम प्राय मानिसहरुमा छ । त्यसैले ट्वाइलेट कमोट, पैसा तथा घरमा पालेको कुकुर बिरालोले खेलाउने खेलौनालाई सबैभन्दा फोहोर तथा धेरै ब्याक्टेरिया हुने वस्तुको ...
अबदेखि स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षण गर्न सकिने
कात्तिक १२ । मृगौलामा कुनै खरावी छ की छैन भन्ने परिक्षण गराउने व्यवस्था अवदेखि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै हुने भएको छ । मृगौला परिक्षणका लागि प्रयोग हुने “डिपिस्टीक किट” मनाङ्ग वाहेकका सवै ...
चितवनमा स्क्रब टाइफसबाट एकको मृत्यु
कात्तिक - ११ । स्क्रब टाइफस रोगबाट आज चितवन मेडिकल कलेजमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । कलेजका चिकित्सक डा शीतल अधिकारीका अनुसार पश्चिम चितवनकी ५१ वर्षीया एक महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु ...
यी अंगमा कोठी हुने महिला अत्याधिक कामुक
कामुकता भित्र मानवको जैविक, सामाजिक, साम्कृतिक, व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, चिकत्सकिय आदि सबै विषयहरू पर्दछन् । कामुकताले मानव जिवनका महात्वपुर्ण पक्षहरूलाई समेटेको हुन्छ । हस्तरेखा विज्ञानले हातका रेखा मात्र नभएर शरीरका अन्य अंगमा ...
भरतपुर अस्पतालकाे हाताभित्र सरकारी फार्मेसी संचालन
कात्तिक - १०। चितवनको सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालले हाताभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिरामीलाई सर्वसुलभरुपमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको हो । अस्पताल बाहिर औषधि पसलमा चर्को ...
पटका पट्काउँदा फोक्सोको क्यान्सर हुने खतरा
कात्तिक - १० दिपावलीका समयमा मनोरञ्जनका लागि पड्काइने भूँइचम्पा र पटाकाबाट निस्कने धुवाँले फोक्सोको सङ्क्रमण, हृदयघात र क्यान्सरको सम्भावना हुने भएकाले सचेत हुन अपिल गरिएको छ । यस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्दा वातावरण ...
अभोकार्डाे खानुहोस् सौन्दर्य बढाउनुस्
कात्तिक १० । कतिपयलाई अभोकार्डो भन्ने फल स्वादिलो नलाग्न सक्छ । स्वाद कसैलाई मन पर्छ, कसैलाई मन पर्दैन । तर यो फल स्वास्थ्य र सौन्दर्यताको दृष्टिले बुहगुणी छ । यो फलले छाला ...
लजाउँदा घातक : स्तन क्यान्सर
प्रकाश बुढाथोकी । स्तन क्यान्सरको चेतना फैलाउन, बेलैमा सचेत रहन र समय समयमा परीक्षण गर्ने सन्देश फैलाउन अक्टोवर १३ लाई नो ब्रा डे र अक्टोबर महिना स्तन क्यान्सरका बारेमा सचेतना जनाउने ...
उपत्यकामा रगतको अभाव, रक्तदान गर्न केन्द्रकाे अाग्रह
कात्तिक - ८ । काठमाडौँ उपत्यकामा ताजा रगतको अभाव भएकाले बिरामी र उनीहरूका आफन्त समस्यामा परेका छन् । दसैँदेखि उपत्यकामा रगत संकलन कार्यक्रम नभएका रगतको अभाव भएको हो । दसैँदेखि उपत्यकामा रगत ...
निचोरेको कागती पनि फाइदाजनक
कागतीलाई तपाईँ के को लागि प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ ? खान होस् या अनुहारमा लगाउन साथै उपचार गर्न पनि यो फलको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ । चिया बनाऔँ वा अचार कागतीको ...
यस कारणले गन्हाउछ मुख
अनुहार चिटिक्क भएरमात्रै पुगदैन । साथीभाइका अगाडि मुख खोल्दा मुख गन्हाउछ भने त्यसले व्यक्तित्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । त्यस्तै धेरै मानिसहरुको मुख गन्हाउने समस्या हुन सक्छ । विहान बेलुकी दाँत ...
नमिल्ने ब्रा लगाउनुहुन्छ ? होसियार
स्तनको आकार मिलाउन वा स्तनलाई आकर्षक ढंगले सजाउन ब्रा लगाइन्छ । तर,अधिकांश महिलाहरु आफ्नो शरिरको बनावटलाई ध्यानमा नराखी ब्रा किन्ने गर्दछन् । कतिलाई ब्राको कारण शरिरमा असहज महशुश पनि हुन्छ । ...
एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सम्पन्न
कात्तिक ७ । पिपुल्स मेडिकल कलेज, मार्क नेपाल र प्रथम पाइला मासिक पत्रिकाको संयोजनमा स्वास्थ्य सेवा समाज नेपालले शनिबार राजधानीको दहचोकमा निशुल्क स्वास्थ्य शिबिरको आयोजना गरेको छ । ख्याति प्राप्त बिशेषज्ञ डाक्टरहरुले ...
अनिद्रा (insomnia) रोग-कारण, असर एवं घरेलु उपचार
राम्रो स्वास्थ्यको लागि खानपान, ब्यायम, काम प्रती ध्यान जति आवश्यक छ त्यतिनै पुरा निन्द्रा लिनु पनि जरुरी छ । राम्रो खानपान र रहनसहनको निन्द्रासँग जति सम्बन्ध छ सुन्दरता सँगपनि त्यतिनै सम्बन्ध हुन्छ ...
सुत्नुअघि गर्नु नहुने यी ५ काम
१ चियमकफी नखानु — सामान्यतह धेरै मानिसहरुको खाना खाएपछि चियाकफी खाने बानी हुन्छ । विशेषगरि जोडोयाममा यस्तो बढि पाइन्छ । सुत्नेबेलामा चियाकफी खाएमा समयमा निद्रा लाग्दैन र लागेको निद्रा पनि खलबलिने ...
चिसोबाट बच्न भान्सामै छन् उपायहरु
जाडो महिना पनि आउन लाग्यो र जाडो सँगै रुघा खोकीले पनि सताउने गर्दछ । त्यसैले अब यस्तो डाईट खानुस जस्ले तपाईलाई चिसोबाट त बचाउँछ नै र चिसोबाट हुने संक्रमण समेत रोकिदिन्छ ...
कात्तिक–५ । तपाईँको खाना खाने तरिका कस्तो छ ? जमिनमा पलेटी कसेर वा डाइनिङ टेबुलमा बसेर ? विकास हुँदै जाँदा हाम्रो खाना खाने तरिका पनि बदलिएको छ । प्राय हामी अहिले ...
एसिड प्रहारको असर कम गराउन चाहानुहुन्छ, यस्ता छन् प्राथमिक उपचार
कात्तिक–५ । नेपालको लागि एसिड आतंक निकै ठूलो चुनौतीको विषय बनेर खडा भएको छ । अज्ञात व्यक्तिले वा कोही चिनेकै होस् कहाँ एसिड प्रहार गर्ने र कसलाई गर्ने हो कसैलाई पत्तो ...
यस्ता छन् पिनास हुने कारणहरु
कात्तिक ५ । पिनास भन्नाले नाकको भित्री भागमा रहेका खाली ठाउँमा अवरोध भएर श्वासप्रश्वासमा बाधा पुराउने एक किसिमको रोग हो । जसलाई साइनोसाइटिस पनि भनिन्छ । साइनोसाइटिस साइनसहरुको इन्फ्लामेसन हो । ...
दुब्लोपनाले सतायो ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
कात्तिक–४ । हामीले मोटोपना घटाउनको लागि थुप्रै उपायहरु पाएका हुन्छौँ । आफूलाई मोटोपनबाट बचाउन मानिसहरु विभिन्न उपायहरु अपनाइरहेका हुन्छन् । तर कामको थकान, हर्मोनमा आउने परिवर्तन, कुनै बिमारी अनि अस्वस्थकर खानपानका ...